မြန်မာမွတ်စ်လင်မ် စည်းလုံးခြင်း၏အင်အား: အလ္လာဟ်ရှင်မြတ် ၏ လမ်း၌ ကြိုးပမ်း က အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်လမ်းပြမည်
အလ္လာဟ်ရှင်မြတ် ၏ လမ်း၌ ကြိုးပမ်း က အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်လမ်းပြမည်
အလ္လာဟ်အရှင်မြတ် ၏ လမ်းတော်၌ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ကြကုန်သော ၊ ဒုက္ခခံကြကုန်သော(မုဂျာဟဒဟ်) တရားအားထုတ် ကုန်ကြသော ပုဂ္ဂိုလ် မွန်တို့အားထိုအရှင်မြတ်သည်မိမိထံတော်ပါးသို့ချဉ်းကပ်နိုင်ရန် ထူးခြား ...လှသည့် ဥာဏ်အလင်း တစ် မျိုးကို ချီးမျြင့်တော်မူသည်။ မိမိနှင့် နီးစပ်မှု ၊ မိမိ၏ နှစ်သက်မှု နှင့်ဂျန္နတ်၏လမ်းများ ကိုမြင်စေတော်မူသည်။ ထိုအရှင် မြတ် ၏ လမ်းတော်၌ (မုဂျာဟဒဟ်) တရားအား ထုတ်သည် နှင့် အမျှထို ဥာဏ်အလင်းသည်ပို၍ပို၍ပွင်းလင်းလာပေသည်။ ထိုသည့် ဥာဏ်အလင်း ပွင့်လင်းလာသည် နှင့်အမျှ ထိုပုဂ္ဂိုလ်မွန်တို့ သည်နက်နဲသိမ်မွေ့လှသော အမှန်တရားများ ကို သိရှိလာကြပေသည်။ သူတစ်ပါး တို့ မတွေး မိသော အရာများကိုပင်မျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့မြင်လာ ကြပေသည်။(အွတ်ဆ်မာနီ) မုချဧကန် အလ္လာဟ် အရှင်မြတ် သည် သူတော် ကောင်းများ နှင့်အတူတ ကွ ရှိတော် မူသည်´ ဟူသည်။`ထိုအရှင် မြတ်သည် သူတော် ကောင်းတို့ အား ကာကွယ် ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်တော် မူသည် ´´ဟူ၏။ ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန် မြန်မာ ဘာသာ ပြန်မှတင်ပြပါသည်။ Chapter (29) sūrat l-ʿankabūt (The Spider) Verse (29:69) - English Translation: : And those who strive for Us - We will surely guide them to Our ways. And indeed, Allah is with the doers of good.See more— with Fa Ri Daa. Special thanks to Sister Salma Lwin
Posted by Ordinary person at 10:24 PM
Du'a of Ibrahim (a)
အလ္လာဟ်ရှင်မြတ် ၏ လမ်း၌ ကြိုးပမ်း က အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်လ...
There isaspecial hour on Friday
Special for Muslims